adolf hitler Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by sharadbhandari भदौ ३०, २०७७
written by sharadbhandari
कोही मान्छे कतिसम्म क्रूर हुन सक्छ ? कतिसम्म निर्दयी र ढुङ्गासमान हुन सक्छ ? जब संसारले उसमा कुनै पनि मानवीय पक्षको छायाँ समेत देख्दैन ऊ क्रूर निर्दयी हुन बाध्य हुन्छ । त्यस्तो एउटा मान्छे छ, जसलाई संसारले कठोर देख्यो । संसारलाई लाग्थ्यो उसको न मन छ, न मुटु छ, न मस्तिष्क छ । संसारले उसलाई कठोरताको पर्याय बनाइदियो । दुनियाँको अपेक्षा अनुरुप उसले आफ्नो भित्री आवरणलाई न्यानो आत्मको खोल ओढाइदियो अनि बाहिरी अनुहारमा डरलाग्दो मुकुण्डो भिर्यो अनि सारा संसारभर ताण्डव मच्चायो । उसको लागि मानिसको हत्या गर्नु एक साधारण खेल बन्यो । उसले लाखौं मानिसहरूलाई जीउँदै भट्टीमा पोल्यो । संसारका बिरलै मानिसहरूले त्यो आत्मभित्र अङ्कुराएको सुन्दर फूल देखे होलान् । बाँकीको लागि ऊ केवल एक क्रूर शासक, तानाशाह र नरभक्षी मात्रै बन्यो । सुन्दर चित्र बनाउँदै सडकपेटीमा क्यानभास बोकी हिँड्ने एउटा निर्दोष आत्म भएको केटोलाई संसारले गलत बाटो देखाइदियो जसको गहिरो असर आजीवन उसमा छापिइरह्यो ।
House ataLake with Mountain by Adolf Hitler, 1910 A.D.
आज म एउटा कठोर बोक्राभित्र अस्तित्व गुमाएको नरम गुदीको आत्मको मीमांसा गर्दै छु । या भनुँ कोपिलामै झ्याङ्गिएको गुलाफको फूल, जो संसार लाई बिझाइरह्यो मात्रै, त्यो सुन्दर फूल जसले काँडाघारीका कोप्चाहरूबाट संसारलाई चिहाइरह्यो । जो मेरो लागि प्रिय थियो, प्रिय छ र सदाबहार प्रिय रहनेछ- माइ डियर हिटलर !
सन् १८८९ अप्रिल २० का दिन जर्मनीको सिमाछेउ अस्ट्रियाको सानो गाउँ ब्राउनाउमा एउटा सुन्दर आत्म भएको केटो जन्मियो । परिवारसँगै सहज जीवनको खोजीमा त्यो केटोपनि विभिन्न ठाउँहरूमा सर्यो । त्यसै क्रममा ६ महिनासम्म त्यो केटो बेनेडिक्टको धार्मिक आश्रममा बस्नुपर्यो । त्यस आश्रममा उसको संगत सन्तहरूसँग हुन पुग्यो । उनीहरूले लगाउने कोटको बाहुलामा “स्वस्तिक चिह्न” अङ्कित हुन्थ्यो जसको अप्रत्यक्षअसर उसको धर्मप्रतिको आस्था बढ्दै गयो । त्यो केटोमा बाल्यकालदेखि नै अचम्मका स्वभावहरूको विकास हुन थाल्यो । ऊ सानैदेखि युद्ध सम्बन्धि खेल रुचाउन थाल्यो । ऊ प्रायः जसो राती चिहानमाथि बसेर आकाश हेर्दै घण्टौंसम्म टोलाइरहन्थ्यो । सन् १९००सम्ममा जब ऊ ११ वर्षको पुग्यो बिस्तारै उसमा कलाकारका गुणहरू देखिन थाल्यो । ऊ रंग , रेखा र आकारहरूमा आफूलाई खोज्न थाल्यो ।
Mother Mary with the Holy Child Jesus by Adolf Hitler, 1913 A.D.
जब सन १९०८ मा उसकी आमाको देहान्त भयो । ऊ १८ वर्षको थियो । त्यसपछि बाबुसँगै ऊ भियाना सर्यो । उसले आफ्नो बाबुको सरकारी जागीर खुवाउने सपनालाई तुहाउँदै आफ्नो अनन्त सपनालाई पछयाउँदै एकेडेमी स्कुल अफ आर्ट (पेन्टिङ) भियाना पुग्यो । सर्वप्रथम सन १९०७ मा नै उसले पेन्टिङको लागि एकेडेमीमा प्रवेश परिक्षा दियो । अनुत्तीर्ण उसले अर्को वर्षको प्रतीक्षा गर्यो । उसले एकेडेमी अफ पेन्टिङमा दुई दिनको प्रवेश परिक्षा दियो । अति नै आत्मविश्वासको साथ रिजल्टको प्रतीक्षा गर्न थाल्यो । तर दुई वर्ष नै प्रवेश परीक्षामा ऊ अनुत्तीर्ण भयो । उसले बिजुली चम्किए जस्तो महसुस गर्यो । उसले बनाएका पेन्टिङबाट निर्णायकहरू सन्तुष्ट भएनन् । त्यसकारण ऊ फेल भयो । यसले हिटलरलाई गहिरो असर पर्यो । ऊ आफू कसरी फेल भएँ भन्ने कुराको स्पष्टीकरण माग्न एकेडेमी पुग्यो । त्यहाँ उसका पेन्टिङबारे धेरै कमी-कमजोरी औंल्याइयो । उसले पहिलोपल्ट अनुभव गर्यो कि उसका पेन्टिङहरूमा कुनै मानवीय संवेदना र पक्ष देखिएन ।
त्यसपछि १८ वर्षको एक युवक चित्रकार दिन प्रतिदिन तनावमा गुज्रन थाल्यो । आफूप्रतिको आत्मविश्वास र खुबी खस्किँदै गएको महसुस गर्न थाल्यो । ऊ एक्लै बस्न थाल्यो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्न थाल्यो । पैसा बिस्तारै सकिँदै गयो । जीवनस्तर झन् खस्किँदै गयो । अन्ततः आफ्नो सबै कुरा सकेर सडकपेटीमा भिख माग्न थाल्यो । राती सडक र दिउँसो गल्लीमा राखिएका बेन्चमा सुत्न थाल्यो । फोहोरी, फाटेका र दुर्गन्धित कपडाहरू लाउन थाल्यो । सन १९०९ डिसेम्बरसम्ममा त उसको हालत नाजुक भइसकेको थियो । त्यसताक यहुदी परोपकारीद्वारा संचालित घरबार बिहीन गृहहरूमा दिन बिताउन थाल्यो । सुरुसुरुमा त्यो फोहोरी टुहुरो जस्तो केटो यहुदीहरूको घृणाको शिकार बन्यो जसको परिणामस्वरूप जीवनपर्यन्त उसले यहुदीहरूको घृणाको बदला लियो ।
The Vienna State Opera House by Adolf Hitler, 1912 A.D.
सन् १९०९ पछि बिस्तारै उसले आफ्नो स्थितिलाई सम्हाल्दै लग्यो । स-साना जलरंगका चित्रहरू, तेल चित्रहरू, केही भवनका आर्किटेक्ट चित्रहरू अनि पोस्टकार्डहरू बनाएर बेच्न थाल्यो । केही पैसा आर्जन गरेर ऊ यहुदी गृहबाट बाहिरियो अनि आफैले भाडाको कोठा लिएर भियानाका सडकपेटीमा चित्र कोर्दै संघर्ष गर्न थाल्यो । भियानाकै सडकपेटीमा बिस्तारै राजनीतिले उसको ध्यान खिच्न थाल्यो । सडकपेटीमा जम्मा भएका मानिसका झुण्डहरू र उनीहरूले गर्ने राजनैतिक क्रियाकलापहरूप्रति उसको रुचि बढ्न थाल्यो । चार वर्ष भियानाका गल्लीहरूमा ब्रस र रंगहरूको संघर्षमा तल्लीन हिटलरले सन १९१३ मा पश्चिम जर्मनीको शहर म्युनिखमा बसाइँ सर्यो । म्युनिखका सडकपेटी र गल्लीहरूमा फेरि एउटा जवान र निराश चित्रकारका रंगिन दिनहरू सुरु हुन थाले । त्यसै क्रममा एक वर्षको म्युनिखको संघर्षपश्चात् सन १९१४ मा जर्मनीका पुलिसहरूद्वारा सडकबाटै ऊ गिरफ्तारमा पर्यो । त्यसताका पहिलो विश्वयुद्धको झिल्का सल्कँदै थियो, यसरी एउटा निर्दोष चित्रकार युद्धको झिल्काले बिस्तारै जल्न थाल्यो ।
त्यही वर्ष नै उसलाई आर्मीको लागि प्रवेश गराइयो । उसले आर्मीका कुनैपनी मापदण्डहरू पूरा गर्न सकेन यद्यपि स्वयंसेवकको रुपमा पहिलो विश्वयुद्धमा एउटा जवान चित्रकारलाई होमियो । युद्ध र गोलीका झिल्काहरूको बीचमा पनि एउटा मान्छेभित्र रहेको चित्रकार आत्म मर्न सकेन । युद्ध चल्दै गयो, बारुदको गन्ध फैलिँदै गयो, भयानक चीत्कार सुनिँदै गयो अनि एउटा स्वयंसेवक चित्रकार निरन्तर युद्ध मैदानको क्यानभासमा अनेक रंगहरू छ्याप्दै गयो । आर्मी हेडक्वाटरमा पनि ऊ घण्टौं चित्रहरू कोर्दै बिताउन थाल्यो । तर एउटा स्वतन्त्र आत्मालाई बिस्तारै हिंसाका राता रंगहरूले भिजाउन थालियो जसकारण एउटा चित्रकार आत्मा बिस्तारै मर्न थाल्यो । अनेक निराशा र तनावको परिणाम आफ्नो न्यानो आत्मालाई पूरै ढाकेर त्यो युवक एक तानाशाह र क्रूर शासकको रुपमा उदायो ।
The Courtyyard of the Old Residency in Munich by Adolf Hitler, 1914 A.D.
दोस्रो विश्वयुद्धमा ऊ एक निर्भीक लडाकु, लिडर बन्यो पूरै संसारले जसरी उसलाई त्रासदी सिकायो त्यसैगरी संसारलाई पनि उसले त्रसित बनायो र ताण्डव मच्चायो । एक तानाशाह शासकको रुपमा उदाएपछि उसले आफ्ना सम्पूर्ण कलाका कामहरूलाई जम्मा गरेर जलाइदियो । केही चित्रहरू जो केही-कुनै कारणवश बचेका थिए तिनलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि सङ्कलन गरियो, कतिलाई संग्राहलयमा पठाइयो । कति चित्रहरू अमेरिकी सेनाहरूद्वारा बलजफ्ती लुटियो । धेरैजसो चित्रहरू अमेरिकी सरकारले गाड्न लगायो । बचेका चित्रहरूलाई प्रर्दर्शनीमा राखेर लिलाम बिक्री गरियो । उसका अनेक माध्यम र शैलीका चित्रहरू भेला गरी जम्माजम्मी चौध लाख अमेरिकी डलर बराबर मूल्यमा तिनलाई बिक्री गरियो ।
केही चित्र अन्वेषकहरूका अध्यन अनुसार हिटलरले आफ्नो जीवनभर जम्माजम्मी ३०० वटा जति पूर्ण चित्रहरू बनाएको अनुमान छ तर हिटलर स्वयंले आफ्नो आत्माकथा ” mein kemph” मा आफूले भियाना रहँदा दिनमा दुई देखि तीनवटासम्म चित्रहरू बनाउने लेखेका छन् । विशेष गरी सन् १९०८ मा एकेडेमीबाट रिजेक्ट भएदेखि सन् १९१४सम्ममा उनले हजारौं चित्रहरू सिर्जना गरेको दाबी गरेका हुन् । ती ६ वर्ष नै हिटलरको जीवनको ऊर्जाशील र सिर्जनशील समय रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ । तर जीवनको अन्तिम समयसम्ममा पनि कला प्रतिको आफ्नो राग सुगन्धित रहिरहने समेत लेखेका छन् ।
सन् १९३९ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि बेलायती राजदुत निभिले हेन्डरसनसँग हिटलरले भनेका थिए,
“म वास्तवमा एक चित्रकार हुँ कुनै राजनेता होइन, एकपटक मात्रै पनि यो पोलिश विवाद सुल्झिएपछि म मेरो जीवन एक कुशल चित्रकारको रुपमा अन्त्य गर्न चाहन्छु ।”
Tree ataTrack by Adolf Hitler, 1911 A.D.
तर अफसोस सन् १९४५ अप्रिल ३० का दिन हिटलरको कोठाबाट रिभल्वरको गोली पड्केको आवाज आयो, दोस्रो गोलीको आवाज सुन्न मानिसहरू पर्खिरहेका थिए । तर दोस्रो गोलीको आवाज आएन तब मानिसहरूले कोठाको झ्यालबाट चिहाएर भित्र हेरे । रगताम्य हिटलरको शरीर सोफामा लडेर चिसो भएको थियो र उनको छेवैमा उनकी प्रेमिका इभा ब्राउनको लास थियो, उनको मुखभरि फिज भरिएको थियो ।
यसरी एउटा गुमनाम चित्रकारको निकै क्रूर र तानाशाह रुपमा अन्त्य भयो । त्यसको मुकुण्डोसँगै बङ्करभित्र उसको शरीर जलाइयो थाहाछैन संसारका कति मान्छेहरूले मुकुण्डो भित्रको त्यो फूल देखे वा देखेनन् अनि त्यसको बास्ना सुँघे कि सुँघेनन् ?
भदौ ३०, २०७७0comment
SHAME | ADDICTION, LONELINESS AND PAIN